गुल्मीको रानीवासमा सामुहिक बेल बिबाह : नेवार समुदायको पुरानो सँस्कृति ! – ebaglung.com
गुल्मीको रानीवासमा सामुहिक बेल बिबाह : नेवार समुदायको पुरानो सँस्कृति !
२०७४ फाल्गुन ११, शुक्रबार १८:०२	Top News, अन्य समाचार, विविध
शव्द चित्र प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ फागुन ११ । वल्ल तिन वर्ष पुगेकी ती अवोध वालिकालाई विवाह भनेको के हो ? पक्कै पनि केहि थाहा छैन । तै पनि अभिभावकहरुले वेहुली श्रृङ्गार–पटार गरेर विवाह मण्डवमा वसालेका छन् । निर्र्दोष उनको चेहरा कति वेला लज्जालु छ त कति वेला रुन्चे छ । विवाहको जग्गे रुरु गाउँपालिकाको रानीवासमा हो भने ती वालिका कुशी श्रेष्ठको घर हुँगा हो ।
बेहुली बन्न विवाह मण्डवमा वसेकी ती वालिका आमाको काख छाड्न नचाहेर डरपोक अनुहारमा रोएर वेहाल छ । विवाह मण्डपमा उनका वावु महेन्द्र श्रेष्ठ, आमा तारा श्रेष्ठ र हजुर वुवा चन्द्रलाल श्रेष्ठ छन् । त्यति मात्र होईन ५ नम्वर प्रदेश सांसद कमलराज श्रेष्ठ पनि ९ वर्षिया नातिनी प्रिन्स श्रेष्ठलाई विवाह गराउन त्यसै विवाह मण्डपमा ल्याएर आएका छन् ।
ती ३ वर्षिया वालिका कुशी श्रेष्ठ सहित आज देखि रानीवासमा ६० जना अवोध वालिकाहरुको सामुहिक विवाह सुरु हुँदै छ । यति वेला कन्यादानको सुरुवाती विधी चल्दैछ । भोलि कन्यादान गर्ने र पर्सी सिन्दुर राख्ने कार्यक्रम रहेको सांसद श्रेष्ठ बताउँछन् । ती वालिकाहरुको विवाह कुनै केटा मान्छे संग भने हुन लागेको होईन । नेवारी परम्परा अनुसार बेल संग विवाह गरिन लागेको हो । जसलाई बेल विवाह भनिन्छ ।
नेवा दवुः वलेटक्सार गुल्मी सहित विभिन्न संस्थाको आयोजनामा तिन दिन सम्म हुन गर्ई रहेको बेल विवाह मल्ल राज्यकाल देखि सुरु भएको सांसद श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेवारहरुकै व्राम्हणद्धारा पुर्णतःः आर्यहरुको विधिवत विवाहका सवै विधी पुराईने चलन रहेको उनको भनार्ई छ । वेल विाह गरिएका छोरीहरुका अभिभावकले निम्तालु खुवाउने पनि गर्दृछन् । रानीवासमा हुन लागेको यो वेल विवाह त्यस भेगमा चार वर्ष पछि गरिदै छ ।
यति वर्षको अन्तरालमा गर्ने भन्ने हुँदैन श्रेष्ठ भन्छन् ११ वर्ष मुनिका वालिकाहरु ५० ÷६० जना भए पछि अभिभावकहरुले सल्लाह गरेर बेल विवाहको चाँजोपाँजो मिलाउने गर्दछन् । यस्तो विवाहले ति अवोध वालिकाहरुमा मनोविज्ञानमा असर पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन हुन त साँच्ची कै विवाह त होईन तर पनि केहि न केहि मनोविज्ञानमा असर हुन सक्छ ।
बेल विवाह छोरीहरुलाई उमेर पुगे पछि विवाहका लागि परिपक्का बनाउन गरिने नेवार समुदायको प्रचलन रहेको बताईन्छ । गुल्मीमा यस्तो वेल विवाह नेवार समुदायको वस्ती विकास संगै सुरु भएको सांसद श्रेष्ठले बताए । वेल विवाहको जग्गेमा नपुग्नु पुर्व लाखे नाच,लगायतको विभिन्न झाँकी वलेटक्सारबाट निस्केको थियो ।
हजारौंको सहभागिता र बाजा–गाजाले गुञ्जायमान बनेको थियो । अहिले पनि रानीवास वजार गुञ्जायमान बनेको छ ।
भिरबाट लडेर गुल्मीमा एक जनाको मृत्यु
मंगलमय नेपाल तारा प्रा बि धुल्लुबास्कोटको २८औ बार्सिक उत्सव सम्पन्न